ဘယ်လိုယဉ်ကျေးစွာဖြစ်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်ကောင်းသောအမူအကျင့်ရှိသည် | USAHello | USAHello
သငျသညျသစ်တစ်ခုနိုင်ငံတွင်ယဉ်ကျေးသောအရာကိုဘယ်လိုသိလား? ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပြုမူ. ဤ 10 အကြံပေးချက်များကိုသင် USA တွင်ကောင်းသောအမူအကျင့်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်.
အများစုမှာအမေရိကန်များဟုပြော “ကျေးဇူးပြု” သူတို့တစ်ခုခုလိုတဲ့အခါ. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်မှာအစားအစာအမိန့်လျှင်, သငျသညျဆိုသညျကားစေခြင်းငှါ, “ငါဟင်းချိုရပါလိမ့်မယ်, ကျေးဇူးပြု”. သငျသညျအရာတစ်ခုခုတောင်းနှင့်လို့ပြောမထားဘူးဆိုရင် “ကျေးဇူးပြု”, အမေရိကန်တွေကိုသင်ရိုင်းစိုင်းကြသည်ထင်ပါလိမ့်မယ်.
အမေရိကန်များဟုပြော “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” အများကြီး. အချို့သောယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်, လူတွေသာပြောပါ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များအတွက်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ပြောဘုံက “ကြေးဇူးတငျစကား” ပင်သေးငယ်တဲ့အမူအရာများအတွက်. ဥပမာ, သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးစာအုပ်လက်လျှင်, သူတို့သည်သင့်ကျေးဇူးတင်မယ်. ပြောမှတ်မိဖို့ကြိုးစားပါ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်,” အထူးသဖြင့်ကူညီပေးနေဒါမှမဟုတ်သင်ကကူညီရန်ကြိုးစားသူမည်သူမဆိုရန်.
အမေရိကန်တွေလည်းပြောပါ “တောင်းပန်ပါတယ်” အခြားယဉ်ကျေးမှုရှိလူများထက်ပို. ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကမတော်တဆလမ်းပေါ်မှာပေါ်တွင်သင်သို့ bumps လျှင်, သူတို့နှင့်အတူတောင်းပန်စေခြင်းငှါ “တဆိတ်လောက်” သို့မဟုတ် “စိတ်မကောင်းပါဘူး။” အမေရိကန်တွေ, အထူးသဖြင့်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေ, တစ်ခါတစ်ရံစကားလုံးကိုသုံးပါ “တောင်းပန်ပါတယ်” သငျသညျဖွစျကွောငျးအရာတစျခုခုအတှကျဝမျးနညျးကွောငျးဖျောပွဖို့, သူတို့ကဖြစ်ရပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မခံခဲ့ရသော်လည်း. ဥပမာ, သင်တနင်္ဂနွေကိုကျော်ဖျားနာခဲ့သူတစ်ဦးဦးကိုပြောပြဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသေဆုံးကြောင်း. ကြင်နာပြီးယဉ်ကျေးဖြစ်, သူတို့တုံ့ပွနျနိုငျ, “ကိုယ်တစ်ကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။”
4. သင်၏နှုတ်ကိုဖုံးလွှမ်းသင့်ရဲ့ burp သို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးသည့်အခါ
အတော်များများကအမေရိကန်တွေကမယဉျကြေးသောအခြားလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ကိုယ်ထင်ရှားဆူညံသံစေရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစား. သူတို့ကဓာတ်ငွေ့သွားမကြိုးစား, burp, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းစွာမသိရပါဘူးအများပြည်သူအတွက်သို့မဟုတ်လူများ၏ရှေ့မှောက်၌ကအခြားကိုယ်ထင်ရှားဆူညံသံစေ. သူတို့ burp ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေကရေချိုးခန်းမှသူတို့ကိုယ်သူတို့ excuse ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျ fart သို့မဟုတ် burp ပြုလျှင်, ပြောယဉ်ကျေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, “တဆိတ်လောက်။”
5. ပွောဆို “ဟယ်လို” သငျသညျလူသစ်ဖြည့်ဆည်းရသောအခါ
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါ, အမေရိကန်တွေပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရ, “ဟယ်လို” သို့မဟုတ်, “မင်္ဂလာပါ, တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။” သငျသညျသငျနှငျ့အတူအခြားသူတစ်ဦးဦးရှိပါက, အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်လူတစ်ဦးမိတ်ဆက်ယဉ်ကျေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်လူတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နောက်တစ်ကြိမ်, သငျသညျပွောနိုငျ, “နောက်တဖန်သင်တို့ကိုတွေ့မြင် nice,” သို့မဟုတ်, “ငါပြီးခဲ့သည့်လကသငျသညျတှေ့ဆုံသတိရ. နေကောင်းလား?”
6. သငျသညျအဆင်ပြေမခံစားရဘူးလျှင်, ကိုယ်လက်လှုပ်မနေပါနဲ့
သူတို့သည်သင့်ကိုခရီးဦးကြိုသည့်အခါအများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသင်၏လက်ကိုလှုပ်လိမ့်မည်. သငျသညျမသက်မသာခံစားရလျှင်, သင်အမြဲအတူတကွသင်၏လက်ကိုတင်နှင့်ရှေ့ဆက်သင်၏ခေါင်းကိုအမှီနိုင်ပါတယ်. ဤသူသည်သင်တို့လက်၌လှုပ်ချင်ကြပါဘူးပြသရန်တစ်ဦးယဉ်ကျေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. တချို့ကအမေရိကန်တွေသငျသညျလကျကိုလှုပ်ချင်ကြဘူးအရမ်းအံ့သြသွားပါလိမ့်မည်သို့သော်ဤအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. သငျသညျမိသားစုပြင်ပအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမထိကြဘူးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကနေဖြစ်ကြပါလျှင်, ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးသငျသညျတှေ့ဆုံနေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှရှင်းပြ. သင်မသက်မသာခံစားရပါစေသောအရာလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
အမေရိကန်တွေကအခြားယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်လူမျိုးထက် သာ. သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ထက်ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသချင်လေ့. US မှာ, လူအများစုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထံမှအကြောင်းကိုတဦးတည်းခြေလျင်မပါဘဲရပ်နေပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကိုအကြားအာကာသနှင့်အတူအုပ်စုတစ်စုရပ်တည်ချက်အတွက်လူတွေတောင်မှ. သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုအလွန်နီးကပ်ရပ်လျှင်သင်စကားပြောသည့်အခါ, သူတို့သည်သင့်ပြင်းထန်တဲ့သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းနေကြသည်ထင်စေခြင်းငှါ. သူတို့ကပြန်မယ့်ခြေလှမ်းကို ယူ. ပျော့အံ့အားသင့်စရာသို့မဟုတ်မရရှိခြင်း၏ပြသခွေငျးငှါ. အခွားသောအမေရိကန်များအလွန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ပထမဦးဆုံးအသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြသောအခါသူတို့သင်စကားပြောသို့မဟုတ်ပွေ့ဖက်နေစဉ်သင့်ရဲ့လက်မောင်းကိုကိုင်စေခြင်းငှါ. သင်တို့ကိုမသက်မသာစေသည်ဆိုပါက, ပြန်ခြေလှမ်းဖို့အဆင်ပြေသည်.
ငါတို့သည်သင်တို့၏ယဉ်ကျေးမှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သငျသညျအားပေး. သို့သော်, သငျသညျစကားပြောသည့်အခါသူတို့မျက်စိထဲမှာကလူကိုရှာဖွေနေသငျသညျအမေရိကရှိဘဝကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပျနိုငျတဦးတည်းအရာဖြစ်ပါသည်. သူတို့စကားပြောနေကြသည်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်များမျက်စိရှိလူများကိုကြည့်လေ့. သူတို့ဟာတစ်ခုလုံးကိုစကားပြောဆိုမှုတွေအတွက်မျက်စိ၌သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုမပြုစေခြင်းငှါ - ကဖွင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသ. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အားပြောသွားနှငျ့သငျမကျြစိ၌သူတို့ကိုကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သူတို့သည်သင့်အရာတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ခြင်းနေကြသည်ထင်စေခြင်းငှါ.
10. အခြားလူများအဘို့အပွင့်လင်းတံခါးကို Hold